Umkhiqizi kanye Umhlinzeki we-Bluetooth Earpod Isitolo esidayisa yonke impahla | BWOO
Izinto: Intambo Yethusi
Uhlobo lwe-Bluetooth: V5.0
Ibanga le-Bluetooth: 10M
Kukalwe Amandla: 3mw
Umthamo webhethri: 130mAh
Uma ungakaze ube ne-Bluetooth Earpod ngaphambili, nazi izizathu ezi-5 okufanele wazi ngokwezansi:
• Ukusetshenziswa okungenazandla, akukho ukukhathazeka ngokuphepha.
• Ikugcina ugxile, Gcina ifoni yakho ivuliwe ngamadivayisi athembekile.
• Isiza ukuthuthukisa umkhiqizo, Impilo yebhethri yinhle.
• Isebenziseka kalula, ikhwalithi yomsindo nokuqina koxhumano kuthuthukiswa kakhulu.
• Ukuphazamiseka okuphansi, ama-codec wekhwalithi ephezulu weBluetooth asuka kude.
Izinto Intambo Yethusi
Uhlobo lwe-Bluetooth V5.0
Ibanga le-Bluetooth 10M
Kukalwe Amandla 3mw
Umthamo webhethri 130mAh
Isikhathi sokusebenza 6H
Ukuzwela -42 + / - 3dB
Umbala Mnyama, mhlophe
Thayipha I-Bluetooth Earpod 5.0
Ama-headphone anentambo awasisekeli lesi sici ngoba awakwazi ukusakaza noma yini efonini yakho. Kepha uma ungekho ezintanjeni zokuqina komzimba noma okunye okugqokekayo, usengakwazi ukujabulela izinzuzo Zamadivayisi Athembekile ngokunikeza i-Bluetooth Earpod yakho amandla okugcina ifoni yakho ivuliwe. Futhi uma uwuhlobo lokugcina ama-headphone akho ezindlebeni zakho noma entanyeni yakho ngaso sonke isikhathi njengami, amadivayisi athembekile angaba yisilondolozi sesikhathi esikhulu njalo ngosuku.
I-Bluetooth Earpod isebenza ngokuyisisekelo kuyo yonke into, inqobo nje uma une-dongle noma ifoni ene-headphone jack. Uma uzizwa uthanda umsindo osezingeni eliphakeme isikhashana, vele uxhume amahedfoni akho avamile. Ufuna ukuyodlala i-basketball kepha awufuni ukuthi izintambo ziphazamise i-jumper yakho yamaphuzu amathathu? Shintshela ku-Bluetooth. Asikho neze isizathu sokungabi nawo ama-headphone anentambo futhi angenantambo futhi usebenzise eyodwa noma enye kuye ngesimo. Ngaphandle kokuthi une-Bluetooth Earpod, unamathela ngaphandle kwezinketho.
I-Q1: Njengamanje sithengisa eMalaysia naseNingizimu Afrika, kepha ukuthengisa kuphansi njengoba angikakukhuthazi okwamanje, i-MOQ yekhebula lakho ngama-3000pcs, ungenza ngezifiso i-logo ezimbili namaphakheji amabili nge-1500pcs ngayinye?
I-A1: Uma unezitolo eziyi-10 ezinama-5kpcs, isitolo ngasinye singahlukaniswa ngama-500pcs, akwanele, uzosinika isixazululo sakho esingcono?
I-Q2: Nginguchwepheshe wenkampani **, ngineklayenti manje elingiphathisa ukuthi ngithole umphakeli wekhanda. Ngicela ungithumele imininingwane eyengeziwe kanye nekhotheshini yekhebula ledatha / ishaja yemoto.
I-A2: Ingabe kunesidingo selogo yangokwezifiso? Uma singanikeza ngokwakhiwa kwamapakethe wamahhala nenkonzo yokuqinisekisa isampula.
Q3: Uyini umkhiqizo wakho wansuku zonke wokukhiqiza?
I-A3: Sinezintambo zokukhiqiza eziyi-9, futhi umthamo wokukhiqiza ojwayelekile ungama-30,000 ngosuku.
I-Q4: Isampula kufanele ifakwe isikhathi esingakanani?
I-A4: Okujwayelekile izinsuku ezingama-3-7
Q5: Isikhathi esingakanani isikhathi esivamile sokukhiqizwa komkhiqizo?
A5: 7-10 izinsuku
Q6: Yisiphi isitayela esisha onaso?
Izinhlobo ezintsha ze-A6: 10-15 zizobuyekezwa njalo ngenyanga. Yiziphi izidingo zakho zemikhiqizo?
Langaphambilini I-TWS earbud enamandla asebhange
Olandelayo: I-Bluetooth Earphone engenantambo ene-MIC
Umsindo Okhansela Ama-Earphone
Uhlobo C Earphone
Izinhlobo ze-Type-C Earphone
Ama-Earphone Angangenwa Manzi
Izindlebe Ezinentambo Ezino-Mic
I-Bluetooth Earphone engenantambo ene-MIC
I-TWS earbud enamandla asebhange
I-earphone enentambo yestiriyo
I-earphone enezintambo ezingama-41 ye-iphone
ama-earbuds we-Bluetooth stereo angenantambo